Golaha Shacabka oo ansixiyay sharciga Batroolka Dalka | Somali National Television - sntv.so
Home GOLAHA SHACABKA Golaha Shacabka oo ansixiyay sharciga Batroolka Dalka
Golaha Shacabka oo ansixiyay sharciga Batroolka Dalka
Muqdisho (SNTV):-Mudanayaasha Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Federaalka ah ee Jamuuriyadda Soomaaliya ayaa maanta meel mariyay sharciga batroolka dalka,kaasi oo ay soo gudbisay Xukuumadda Federaalka Soomaaliya.
Wasiirka macdanta iyo Batroolka ee xukuumadda Federaalka Soomaaliya Eng Cabdirashiid Maxamed Axmed iyo gudoomiyaha guddiga kheyraadka dabiiciga ah iyo bay’ada ee golaha shacabka Xildhibaan Yuusuf Xuseen Axmed Gamaadiid ayaa golaha uga mahad celiyay anasixinta sharciga Batroolka.
Sidoo kale Xildhibaanada Golaha Shacabka ayaa dib u celiyay hindise sharciyeedka dhismaha Guddiga la dagaalanka musuq maasuqa oo maanta lagu balansanaa in loo codeeyo,ka dib markii qaar ka mid ah xildhibaanada ay aragtiyo ka dhiibteen su’aalana ay ka keeneen qodobo ka mid ah hindise sharciyeedkan sida uu sheegay shir guddoonka Kulanka.
Ugu dambeyn wasiirka Arrimaha Gudaha iyo Federaalka ee xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Cabdi Maxamed Sabriye ayaa golaha ka hor jeediyay Hindise sharciyeedka doorashooyinka Qaranka.
Qaar ka mid ah Xildhibaanda golaha shacabka ayaa su’aalo hindise sharciyeedka Arrimaha doorashooyinka la xiriira weydiiyay wasiirka oo isagana ka jawaabay.
Sidoo kale xildhibaanada golaha shacabka ayaa maanta loo qeybiyay wax ka bedelka sharciga iibka Qaranka,waxaana kulanka soo xiray Kusimaha Guddoomiyaha golaha shacabka ahna guddoomiye kuxigeenka koowaad ee golaha.
Previous articleRa’iisul wasaaraha XFS oo kulan miro dhal ah la qaatay Wakiilka sare ee Midowga Yurub u qaabilsan Arrimaha Dibadda
Next articleMadaxweynaha Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed oo magacaabey Wasiiru Dowlayaal.